ဒီတပတ် English American-Style Idioms ကဏ္ဍမှာ တယော လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ (Fiddle) ဝေါဟရကိုခြေခံတဲ့အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ To play second fiddle, Fit asafiddle နဲ့ To fiddle while Rome burns တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) To play second fiddle
ဒီအသုံးဟာ တေးဂီတလောက က ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ To play (တူရိယာတီးခတ်တာ)၊ second (ဒုတိယ)၊ fiddle (တယော) တို့ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ဒုတိယတယောထိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Fiddle ဆိုတဲ့ အသုံးက (၁၉) ရာစုက သုံးနှုန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ အခုခေတ်မှာတော့ ဒီတူရိယာကို Violin လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တူရိယာတီးဝိုင်းကြီးတခုမှာ ရှေ့ ဆုံးမှာနေပြီး ဂီတလက်စွမ်းပြသူကတော့ Lead violin တယောကို ပင်တိုင်ထိုးသူဖြစ်ပြီး၊ ပရိသတ်ကသူ့လက်ရာကို အာရုံစိုက်နားထောင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နောက်ကလိုက်ပြီး ဒုတိယတယောထိုးရသူကတော့ Second fiddle ထိုးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဒုတိယ တယောထိုးသူရဲ့တာဝန်ကပင်တိုင်တယောထိုးသူရဲ့တေးသံကို ဘေးကနေလိုက်ပြီး ပံ့ပိုးပေးရတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် To play second fiddle ဆိုတဲ့ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က နေ့စဉ်ဘဝမှာ လူတဦးအနေနဲ့ နေရာအပေးမခံရတာ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုကိုယ့်အထက်မှာပိုသြဇာအာဏာရှိတဲ့သူ၊ ပိုအရေးပါတဲ့သူ ရှိနေတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူက ပထမ၊ ကိုယ်က ဒုတိယနေရာ လိုက်ရတဲ့သဘောပါ။ တနည်းတော့တန်းတူအရေးပေးမခံရတာ၊ ဦးစားပေးမခံရတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Mary told me she is tired of playing second fiddle to Susan, who is not as smart as she is!
Mary က သူ့လောက်မတော်တဲ့ Susan လောက်အရေးပေးမခံရတာ သူ့အနေနဲ့ စိတ်မရှည်တော့ဘူးလို့ ကျနော့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။
(၂) Fit asafiddle
Fit (ကျန်းမာရေးကောင်းတာ)၊ as (နှိုင်းယှဉ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဝိဘတ် - preposition)၊afiddle (တယောတလက်)၊ ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တယောတစ်လက်လိုပဲ ကျန်းမာရေးကောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တယောထိုးသူအနေနဲ့ သူ့ တယောရဲ့သံစဉ်ကြိုးတွေကို အမြဲညှိနှေဖို့လိုအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမြဲဂရုစိုက်ပြီးထားတဲ့ တယောဟာပျက်ခဲလှပြီး၊ အမြဲပဲအခြေအနေကောင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို အမြဲဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေကောင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် I’m fit asafiddle လို့ ပြောရင် မြန်မာဘန်းစကားမှာတော့ ကျန်းမာရေးက ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေတာပဲလို့ပြောတာနှင့်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Joe watches his diet and exercises regularly. No wonder, he’s fit asafiddle!
Joe ကအစားကိုသတိထားစားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလည်း မှန်မှန်လုပ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူ့ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေတာမဆန်းပါဘူး။
(၃) To fiddle while Rome burns
To fiddle (ဒီနေရာမှာ verb ကြိယာအဖြစ် အသုံးပြုထားပြီး တယောထိုးတာ) ၊ while (တခုခုဖြစ်နေတုန်း)၊ Rome (ရောမမြို့တော်)၊ burns (မီးလောင်နေတာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ရောမမြို့ တော်ကြီး မီးလောင်နေတုန်း တယောထိုးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက အေဒီ (၆၄) ခုနှစ်က ရောမဧကရာဇ် နီရိုလက်ထက်မှာ ရောမမြို့ ကြီး မီးလောင်နေပေမယ့် ဧကရာဇ်နီရိုက ဘာမှမဖြစ်သလို တယောထိုးပြီး နေတယ်ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အရေးပေါ်အခြေအနေ၊ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ဘာမှမဖြစ်သလိုသဘောထားပြီး ခပ်ပျော်ပျော်၊ ခပ်ပေါ့ပေါ့နေတာ၊ အရေးမကြီးသလိုနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကို မလုပ်ဘဲ တခြားသိပ်အရေးမကြီးတာတွေကိုသွားပြီး ဂရုစိုက်လုပ်နေတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Environmentalists claimed world leaders were fiddling while Rome burns!
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနှင့် အရေးကြီးတာတွေကို ဦးစားပေးမယ့်အစား အသေးအဖွဲတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ခံနေကြတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ကြတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ တယော (Fiddle) ကို အခြေခံတဲ့ idiom အသုံးအနှုန်းတချို့က To play second fiddle, Fit asafiddle နဲ့ To fiddle while Rome burns တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Obama မိန့်ခွန်းပါ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ